Kitra sy fifidianana e !
Fadin-tseranana Toamasina Hatao lavanty ireo entana mameno toerana
Hanatanteraka lavanty ho an`ny daholobe (vente aux enchères publiques) ny fadin-tseranana ny 09 novambra izao any Toamasina.
Baolina kitra eran-tany no mahoraka amin'izao Betsaka ireo diso fanantenana tamin'ireo ekipa nandao Toa ireo kalaza lahy manko no nihintsana avokoa Mampieritreritra tena mampikaon-doha.
Ary ity fifidianana filoha sao mba hitovy amin'izany ?
Hoe ireo antoko mafy be no tsy ho lany.
Angamba dia hisy ho be sinema
Hikorisa elabe mody hikodiadia amin'ny tany.
Hatreto aloha ireo fantatra fa hirotsaka
Toa tsy dia maharesy lahatra mifangaro voraka
Ao ireo efa nambotry firenena mbola miseho ho favy
Efa hita fa voalavo izao mbola milaza hoe ramanavy.
Iza ary no ho tompondaka eran-tany amin'ity baolina boribory ?
Ary iza ilay ho filoha vaovao hanavotra sa mainka hampahory.
Samia velon'aina isika mianakavy hahita ny ampitso
Fifidianana filoha sy ady baolina kitra.